प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै पशुपतिमा पूजा – Fewa Times
प्रकाशित मिति: March 4, 2020 12:00 pm
काठमाडौँ – शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भैरहदा उनको स्वास्थ्यलाभको कामना सहित पशुपति नाथमा बिषेश पूजापाठ गरिएको छ । पशुपति बिकास कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना सहित पसुपति नाथमा मंगलबार पहिलो प्रहरको पुजापाठ गराएका हुन् ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणको सफलतासहित शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना सहित बिहान भएको बिषेश पूजापाठ र रुद्राभिषेकमा डा. थापा सहित अन्य सुभेक्षुकहरुको सहभागिता रहेको थियो । कोषाध्यक्ष थापाले चीनबाट सुरु भई विश्वका ७७ देशमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमण नेपालमा नफैलियोस भनेर राष्ट्रदेव पशुपति नाथमा बिषेश पूजापाठ गराउन लागेको पनि जानकारी दिए ।